Avy taiza ny batemin'i Joany
Naseho ny : 16 desambra 2019
Alatsinainy 16 desambra 2019 - Herinandro fahatelo amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 23-27.
Tsy zavatra roa samy hafa akory izay nataon'i Joany Batsita sy i Jesoa, fa iray ihany dia ny fitoriana ny Fanjakan'Andriamanitra. Samy avy amin'Andriamanitra, saingy i Joany dia mpialoha làlana fotsiny ihany fa i Jesoa kosa no mpanatanteraka.
Koa izay mino sy mandray an'i Joany Batista ho Mpaminany dia mino sy matoky fa i Jesoa no Ilay Mesia nambarany fa ho avy, dia ilay maneho ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra manavao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fampianarany sy ny asany feno fahefana.
Ny mihevi-tena ho manana ny marina sy fatra-pisalasala, toa an'ireo lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona, dia tsy ho afaka hino an'i Jesoa ho Mesia, satria manidy ny fony tsy handray ny fanavaozana sy ny marina ambarany hahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany, raha te hampitombo finoana an'i Kristy sy hahalala Azy bebe kokoa isika, dia mila mihaino ny Mpaminany, mila mandalina izay manambara Azy dia ny Soratra Masina, ary mila mifanerasera Aminy. Fa arakaraka ny halalantsika Azy no itomboan'ny fitiavantsika Azy koa.
Eto am-panomanana ny fahatongava'ny Tompi isika, toa an'ireo vahoaka voafidy fahiny: mangetaheta an'Andriamanitra, dia samy miezaka ho vonona handray Azy ao am-po ary hanaiky ho havaoziny mba ho mendrika Azy ny tenantsika sy ny asantsika ary mba ho fetim-pifaliana tanteraka ho antsika ny Noely.
Jesoa ô, tsy holavorary izay ataonay raha tsy hombanao, tsy hahavonjy anay ny zavatra rehetra raha tsy havaozina. Koa afaingano ny dianao ety aminay ary aza avela hatoky tena izahay fa ataovy maniry Anao hatrany.